यसकारण नयाँ पार्टी
Wednesday, 20 June 2012 12:54	मोहन वैद्य
जातीय राज्यको पक्षमा
Wednesday, 20 June 2012 12:41	नारायण निङलेखू
यतिखेर नेपालीहरुमा आपसी शंका र अविश्वास क्रमशः यसरी बढदै जाँदो छ कि एकले अर्कोको बोली सुन्न सकिरहेको छैन। मन छाम्न र भावना बुझ्न सकिरहेको छैन। शीरमाथि बोकेका आ-आफ्ना अपारदर्शी बाकसजस्ता भएका छन् प्रत्येक नेताका टाउका। एकले अर्काको बाकसभित्र के छ देख्न सक्दैन। आँखामा आ-आफ्ना रङका चस्मा लगाएका छन्। एकले अर्काको वास्तविक रङ देख्न सकिरहेको छैन। प्रदेश नामाकरणको सिलसिलामा जेजस्तो खैलाबैला हुँदैछ यसबाट के देखिन्छ भने हामी एक अर्कालाई बिलकुल बुझन सकिरहेका छैनौं। वास्तवमै कुरो नबुझी रहेका हौं भने समयको अन्तरालमा बिस्तारै बुझाबुझ हुँदै जाला। यदि बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौं भने हामी कपटी हौं र हाम्रो नियतमा दोष छ। यो दोषले गर्दा विस्तारै मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने सम्भावना बढने छ।
Wednesday, 20 June 2012 12:40	रामेश्‍वरी पन्त
विशिष्ट श्रेणीमा पास भएर सफल इन्जिनियर बन्ने सपनासँगै बैतडीको दुर्गम गाउँबाट एसएलसी दिएकी एक किशोरी परीक्षा दिँदै गरेको समयमा स्थानीय दुई युवाहरूबाट बलात्कृत भइन्। अहिले उनी आफ्नो तुहिएको सपना सम्झिँदै काठमाण्डौको लैनचौरस्थित रक्षा नेपालमा टोलाइरहेकी छन्। त्यो राक्षसी प्रवृत्तीको शिकार नभएको भए आज सायद उनको एसएलसीमा उत्कृष्ट हुने सपना पूरा हुन्थ्यो होला। निधारमा रातो टीकासँगै घरभरी उल्लास छाइरहेको हुन्थ्यो होला।
Wednesday, 20 June 2012 12:35	चन्द्र भण्डारी
विश्वका अधिकांश देश आआफ्ना सम्पदालाई सदुपयोग गरेर सम्पन्न हुँदैछन् भने नेपाल चाहिँ केही राजनीतिक दलका नेताहरूको आत्मकेन्द्रित निर्णय, बुझाइ, र सोचका कारण विखण्डन र मानवीय विपत्तिमा फसेको छ। यस्तो अवस्थाबाट बचाएर देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने कार्य अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनगएको छ।
प्रत्युत्पादक विदेश भ्रमण
Wednesday, 20 June 2012 12:32	सम्पादकीय
प्रतिपक्षीको विरोध, आफ्नै पार्टी एनेकपा (माओवादी) निर्देशन र देशको राजनीतिक जटिलताको मागसमेतलाई उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विदेश यात्रामा निस्केका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा आयोजना गरेको वातावरण र दिगो विकाससम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री भट्टराई दलबलसहित सोमबार नेपालबाट प्रस्थान गरे। विपक्षी दलले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति नजुटेका बेला मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश जानु उपयुक्त हुँदैन भन्दै उनलाई ब्राजिल भ्रमणमा नजान भनेका थिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी र युवा संगठनले उनको भ्रमणविरुद्ध विरोध प्रदर्शनै गरे।
Tuesday, 19 June 2012 11:37	गोविन्द अधिकारी
इजिप्टको क्रान्तिलाई अरब जागरणको 'छपनी' भन्ने गरिन्थ्यो। हुन पनि होस्नी मुबारकको ३० वर्ष लामो अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गर्ने इजिप्ट विद्रोहले जति प्रभाव अरू अरब मुलुकका आन्दोलनले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सत्तै्कनथ्यो। वास्तवमा इजिप्टको सत्ता परिवर्तनकै कारण कतिपयले सन् २०११ को सुरुमा लोकतन्त्र र न्यायका पक्षमा भएका सफल विद्रोहहरूलाई 'लोकतन्त्रको अर्को लहर' मानेका थिए।
द्वन्द्व चर्काउने षड्यन्त्र
Tuesday, 19 June 2012 11:34	सूर्य थापा
राज्यको संघीय पुनःसंरचनाको विषयका कारण 'ऐतिहासिक' संविधानसभाले अन्ततः अवशानको नियती भोग्नुपर्‍यो। त्यस घटनालाई हेर्ने आ-आफ्नै दृष्टिकोणहरु छन् : जस्तो कि माओवादी संस्थापन (अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई)का अनुसार संविधानसभाको अवशान नेपाली कांगे्रस र एमालेले गराएका हुन्। भलै, मंसिर ७ गते नया" चुनावमा जाने निर्णय माओवादी स्थायी समितिको निर्णयअनुरुप उसकै नेतृत्वको सरकारले एकलरुपमा गरेको यथार्थ हो। बरु आफ्नै कदम र कर्मको दोष अरुमाथि थोपरेर स्वयम् कर्ताले नै पानीमाथिको ओभानो बन्ने आश्चर्यजनक प्रयत्न गरेका छन्। माओवादीकै वैद्य-बादल र विप्लव पक्षका अनुसार यो चुनवाङ बैठकपछि प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा अबलम्वन गरिएको कार्यदिशाकै असफलता हो। र, संविधानसभाको अवशानका निम्ति मुख्य जिम्मेवार प्रचण्ड र बाबुराम नै हुन्।
धोनी आगमनको सन्देश
Tuesday, 19 June 2012 11:33	सम्पादकीय
भारतीय क्रिकेट कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए पनि नेपाली क्रिकेट वृत्तमा चर्चा बाँकी नै छ। शनिबार पहिलो पटक नेपाल आएका धोनी दुई दिन प्रशंसकको घेरामा रहे, केही समय नेपाली क्रिकेट खेलाडी र यसलाई हाँक्ने संस्थाको अधिकारीसँग बिताए। धोनीको भ्रमण आफैंमा अवसरका रूपमा रहे पनि नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था भने व्यवस्थापनदेखि सम्बन्ध विस्तारसम्ममा चुकेको देखियो। यसअघि गोर्डन ग्रिनिज, ब्रायन बिगिन्स, यसपाल शर्मा, टोनी ग्रेग, अब्दुल कादिर, सन्दीप पाटिलसहितका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीजस्तै धोनीले पनि नेपाली क्रिकेटको गुन गाए।
माओवादीमा भूमिकाको लडाइँ
Monday, 18 June 2012 12:41	मनोज दाहाल
अंग्रेजी कथाकार डेनियल डेफोको ‘रबिन्सन क्रुसो' प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई मनपर्ने कृतिमध्ये एक हो। क्रुसो समुद्री यात्राक्रममा पानीजहाज दुर्घटनामा परेर एक्लै सुनसान टापुमा पुग्छ र वर्षौंसम्म प्रकृति-जनावरसँग संघर्ष गरेर आफ्नो रक्षा गर्दै अन्ततः मानव सभ्यतामा फर्कन सफल हुन्छ।
कहिलेसम्म गरिरहने आन्दोलन?
Monday, 18 June 2012 10:09	विनोद सिजापति
मुलुकमा राजनीति र गर्मीको पारो एकैसाथ उच्च गतीमा बढिरहेको छ। मनसुन सुरु भएर शितल हुनुपर्ने बेलामा उखरमाउलो गर्मीले वातावरण गुम्सिएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा आफ्ना अधिकार सुरक्षित गराएर पुर्ननिर्माणमा जुट्नु पर्ने बेलामा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको हल्ला सुरु भएको छ।
निर्जीव कांग्रेसको एकता
Monday, 18 June 2012 10:06	वसन्त बस्नेत
नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन भए लगत्तै असन्तुष्ट कार्यकर्ता मातृपार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला भेट्न पार्टी मुख्यालय सानेपा गएका थिए। पद्दति र प्रक्रिया हुँदाहुँदै सभापतिले एकलौटी गर्न खोजेको उनीहरूको दुखेसो थियो। कुर्सीमा मौन बसिरहेका सभापतिलाई एक प्रतिनिधिले भने, 'सभापतिज्यु, भएको ढोका थुनेर झ्यालबाट छिर्नुभएन।'
मुलुकले थेग्न नसक्ने ध्रुवीकरण
Monday, 18 June 2012 10:05	रवीन्द्र अधिकारी
वार्ता, संवाद र सहमतिका हजार नाटक देखाएर जनतालाई संविधान बन्दैछ भन्ने आशा देखाउने, अरू राजनीतिक दललाई विकल्प खोज्न पनि नदिने अनि संविधान सभा भंग गराएर भ›गोल राजनीतिबाट शक्ति निर्माण गर्ने माओवादी सोचले आज मुलुकलाई इतिहासको अत्यन्त कठिन मोडमा उभ्याइदिएको छ। सय वर्ष पुराना बोल्सेविक क्रान्तिका सूत्रलाई नेपाली माटोमा अभ्यास गर्दा मुलुकमा न माओवादीले भनेको क्रान्ति भयो न त मुलुकले शान्ति र संविधान पायो। सशस्त्र द्वन्द्वको त्रू्कर पन्जाबाट मुक्त भएको मानिएको नेपाली समाज अत्यन्त कहालीलाग्दो जातीय द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो। साना प्रयासले यसको अवतरण सम्भव देखिँदैन।
Monday, 18 June 2012 10:02	सम्पादकीय
राजनीतिक आग्रह तथा कार्यक्रम पनि तर्क र विवेकमा सम्मत नभए अराजनीतिक बन्न पुग्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको अहिलेको राजनीति पनि बिस्तारै अराजनीतिक बन्दै गएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्को चुनावको घोषणा गर्दा अरू राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगर्नु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले निर्देश गरेको सहमतिको राजनीतिविपरीतको अभ्यास हो। सहमतिविपरीत भएको निर्वाचन घोषणाको विरोध गर्नु विपक्षी दलहरूको अधिकार र कर्तव्य पनि हो।
Sunday, 17 June 2012 08:13	युग पाठक
तास नेपालीहरुको पनि प्रिय खेल हो। गाउँघरका पिँढीहरुदेखि सरकारी कार्यालयका कोठाहरुसम्म तासले धाक जमाएको पाइन्छ। एकपटक अदालतले नै तासको एक खेल 'म्यारिज'को महिमागान गर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर, तासको खेलमा प्रयोग हुने गणितमा भने हाम्रो कमै ध्यान जान्छ। गणितशास्त्रमा यसलाई 'प्रोव्याबलिटी' सिद्धान्त भनिन्छ। अर्थात् सम्भावनाहरुको गणना र विश्लेषण गर्ने सिद्धान्त। सुनिन्छ, नेताहरुदेखि नीतिनिर्मातासम्म तास खेल्न मन पराउँछन्। तर, तासमा जसरी सम्भावनाहरुको गणनाका आधारमा हिसाबकिताब गरिन्छ, त्यसैगरी राजनीति र देश चलाउने नीतिहरुको गणना गर्ने विधि भने न नेताहरुले, न त नीति निर्माताहरुले नै विकास गरेका छन्। संविधानसभा विघटनपूर्व र त्यसपछिका राजनीतिक परिघटनाहरु अनि संचारमाध्याममा चलिरहेका बहसहरुको अध्ययन गर्दा एउटा निरस प्रतिक्रियात्मक चरित्रकै प्रचुरता भेटिन्छ।
एकल राष्ट्रियतामा आधारित सह-अस्तित्व
Sunday, 17 June 2012 08:12	युवराज संग्रौला
संविधान सभा भंग गरिएपछि नयाँ संविधान निर्माणको भविष्य अब अनिश्चित भएको छ। नेपालको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा दुवै जोखिममा परेका छन्। दिनदिनैका बन्द र हड्ताल, अराजकता र चरम अवसरवादी राजनीतिक परिदृश्यमा अर्थतन्त्र कमजोर हुनेमात्र होइन, असफल हुने खतरा पैदा भएको छ। बिग्रँदो आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रित अराजकताले जनतामा सिर्जना गर्ने मनोविज्ञानले सचेत मानिसमा निरासालाई झन व्यापक बनाउनेछ। र, त्यसबाट युवाहरुको पलायनता झन तीव्र हुनेछ। तर नेपाली शिक्षित समूह समस्याको जरो दलका नेताहरुमा मात्र देख्छ, नेपाली राजनीतिको वर्तमान स्थिति 'परिणाम' मात्र हो, समस्याको कारण होइन।